Laba arrin midkood ayaa keentay xabad joojinta si iskeed ah ugu dhawaaqday ONLF! – Xeernews24
Laba arrin midkood ayaa keentay xabad joojinta si iskeed ah ugu dhawaaqday ONLF!
13. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Jabhadda ONLF waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah, iyada oo u sababeeysay dhawr arrimood oo ay ugu weyn tahay is-bedelka xawliga ku socdaa ee Itoobiya ka dhacay.
Hase ahaatee, waxaa su’aalo la iska weydiiyey wax xilligan ku soo beegay xabad joojinta halka dhinac ah maadama aysan Itoobiya iyadu tallaabaas qaadin kana hadal ilaa hada.
Waxaan fallanqeyntan kooban ku eegi doonnaa laba qodob oo keeni kara tallaabada ONLF, anaga oo kaashaneyna xogaha aan heleyno.
1 – Dowladda Eritrea oo laga yaabo in ay ku cadaadisay ONLF xabad joojita.
Sida laga war qabo Eritrea iyo Itoobiya oo muddo col ahaa waxaa ay dhawaan kala saxiixdeen heshiisyo dhinaco badan taabanaya oo uu amniga ka mid yahay.
Iyada oo taas laga shidaal qaadanayo, Eritrea oo muujineysa in ay u hoggaansantay heshiiskii ay Itoobiya la gashay , waxa dhici karta in ay Jabhadihii xarumaha ku lahaa dhulkeeda ku cadaadisay in ay joojiyan dagaalkii ay ka qaadi jireen wadankeeda kuna dhawaaqaan xabad joojin, waxaa kuwaas ka mid ah ONLF.
2 – ONLF oo u sii gogol xaadhaneysa in lagu wareejiyo maamulka gobolka Soomaali Galbeed.
Tan iyo markii uu qalalaasaha galay gobolka Soomaali Galbeed waxaa soo baxayey tuhunno kala duwan iyo cidda sida tooska ah talada Jigjiga u qaban doonta markii la riday Cabdi Maxamuud Cumar(Cabdi Iley)
Hase aaatee, waxaa muuqata in dhaq dhaqaaqyo badan ka jiraan gobolkaas iyo dhinacyo badan oo u xusul duubaya qabashada talada is maamulka Soomaali Galbeed.
Si ay ONLF oo fursad ugu hesho ka hadalka masiir maamul oo ay hormuud ka tahay, waxaa dhici karta in xabad joojitii ay sameysay ugu gogol xaadhatay.
Dhinaca kale, waxaa wali loo dhagtaagayaa falcelinta ka timaada Itoobiya ee ku saabsan tallaabaddii ay ONLF qaadatay.
Ragga is badalka Itoobiya ka dhacay odoroosa waxay qabaan in mustaqbalka dhow jabhada ONLF ay u xuubsiiban doonto urur siyaasadeed u dartami doona awooda gobolka Soomaali galbeed si talaabada u gaadhan waxaa hortaagan in ay magaca ONLF uu badalan magac urur siyaasadeed oo cusub si ugu soo baxaan doorashooyin dalka laga qaban doono waxaanaa la hadal hayaa in ay wada hadal hoose kula jiraan ururo kale oo ay is bahaysi siyaasadeed ku balansanyihiin.
Halkaasina waxaa ku soo afjarnmi doona hammigii jabhada ee ahaa xoraynta dal madaxbanaan oo la yidhaahdo Ogadenia.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Ogadenia.jpg 292 500 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-13 08:07:192018-08-13 08:07:19Laba arrin midkood ayaa keentay xabad joojinta si iskeed ah ugu dhawaaqday ONLF!
Axmed Shide Oo Awooda DDSI Gacanta Laga Saaray & Xil Culus Oo Loo Maga... Wafdi uu Hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Eritrea ayaa soo gaadhay...